Muuri News Network » DEG DEG: Mareykanka & Ciidanka DF oo hada Weerar Cir & dhul ah ku qaaday G/Sh/hoose.
DEG DEG: Mareykanka & Ciidanka DF oo hada Weerar Cir & dhul ah ku qaaday G/Sh/hoose.
Sida ay sheegayaan Wararka naga soo garaya gobalka Shabeelaha hoose ciidanka sida gaarka ah u tababaran ee dowlada Soomaaliya iyo ciidanka kumaandooska mareykanka ayaa weerar cir iyo dhul ah ku qaaday saldhig kooxdaasi shabaab ku lahaayeen deegaanka Bariire.
Qof ku nool deegaankaasi Bariire ayaa Daqiiqado ka hor u sheegay Muurinews.com in ay maqlayaan dhawaqa risaasta culus iyo mida fudud isalamkaana ay arkayaan diyaaraha dagaalka oo ku dul wareegaya kuwaas oo mararka qaar ridaya gantaalo culus.
Waxaa adag in la ogaado qasaaraha laba dhinac iyo dadka shacabka ah hasa ahaatee qofka Goobjoogaha ah ayaa inoo sheegay in dadkii shacabka ahaa inta badan ay ka barakaceyn deegaankaasi bariire kadib markuu dagaalka bilawday xalay saqdii dhaxe.
ISHA WARARKA OO –DHAN